काठमाडौँ : विदेशबाट नेपाल फर्कंदा केहि मात्रामा सुन ल्याउन पाउने नीति धेरैलाई थाहा छ तर यसको बिषयमा स्प’ष्ट भने थाहा नहुन सक्छ ।
गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन तथा सुनका गहना तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सुन तथा चाँदीमा लाग्ने भन्सा’र महसुल बढाएको थियो ।
पछिल्लो नियम अनुसार विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले ५० ग्रामसम्मका सुनका गहना लगाएर आउँदा कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन तर ५० ग्रामभन्दा बढी १०० ग्राम’सम्मका सुनका गहनामा भने प्रति १० ग्राम ८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले भ’न्सार महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदी तपाइँले ५० ग्रामसम्मको सुनको गहना ल्याउनु भएको छ भने कुनै शुल्क ति’र्नुपरेन तर ६० ग्राम ल्याउनुभएको छ भने ५० ग्रामसम्म निशुल्क भएपनि थप १० ग्रामको रु. ८५००/- शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यही दरले ७० ग्रामको १७,०००/-, ८० ग्रामको २५,५००/-, ९० ग्रामको ३४,०००/- र १०० ग्रामको ४२,५००/- ति’र्नुपर्ने हुन्छ ।
काँचो सुन ल्याउने नियम
यसरी हिसाव गर्दा तपाइले कुल १०० ग्राम काँचो सुन ल्याउनु भएमा कुल रु. ८०,०००/- महशुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर १०० ग्राम भन्दा बढी काँचो सुन ल्याउनु भएमा भने सरकारले जफत गर्नेछ । यस्तै १० ग्रामसम्म चाँदी ल्याउँदा प्रति १० ग्राम ७५ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । -साझा सबाल
२०७८ आश्विन २, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 89 Views